Liiska Best File Software Recovery 2013
> Resource > Ladnaansho > Liiska Best File Software Recovery 2013
Loss xogta noqon kartaa mid aad u ba'an gaar ahaan meesha ma jiraan baaritaan dib la heli karo. Iyadoo jiritaanka teknoolajiyada casriga ah soo kabashada ee files aad tirtiray lagu xallin karaa iyadoo la isticmaalayo qaar ka mid ah software ka gashay kaalinta ugu fiican 2013.
R - Studio Windows
Operating Systems: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows server 2012
Kharash-ool ah hab A ee soo kabashada xogta isticmaala kabashada file cayriin. Waxa kale oo ku jira module-dhiska weeraray. R-Studio Windows waa software kabashada file free ah in dib u soo celineysa xogta ku saleysan waxa qaababka kala duwan.
• Waxay garan karaan cabbir kasta oo weerar
• Taageerada ceeriin Data Recovery ka aad u burburay iyo ilo lagu kaydiyo xogta aqlka
• The soo kabsaday lagu kaydin karaa meel kasta oo door bidayo
• Taageerada ballaaran oo kala duwan oo ka mid ah drives
• Ladnaansho xog-lo.
• ma soo kaban karaa qaabab xogta qaar ka mid ah
Hel R - Studio Windows
Operating Systems: Windows 7 / XP / Vista
Waxay bixiyaan xal kabashada xogta dagdag ah ka eryi adag, CD-yada, DVD-yada, qoruhu iyo qalabka dibadda. Advanced Disk Recovery waa mid ka mid ah hab fudud ee soo kabashada file in nayaa hawsha kabashada xogta laga badiyay.
• Waxaa retrieves oo dhan files tirtiray iyadoo lagu eegayo nidaamka oo dhan xog ah in aad u baahan tahay oo ah.
• Waxaa markaas uu idin ​​siinayo xiisaha badan ee ka mid ah fayl sidaas oggolaadaan in aad iyaga ku badbaadin in meesha aad doorato.
• Waa mid ka mid ah software ah oo lagu kalsoonaan karo ay sabab u tahay qaababka ay sida ay awoodda si scan iyo kabsado nooc kasta oo xog
• Waxa kale oo ay awood u celinta in ka badan hal folder in meel kasta oo la xushay
• Waxa soo celin karo files ka qalab kale oo dibadda ku xiran kasta.
• Ladnaansho xogta lumay waqti sare billaabayo
• Ladnaansho oo dhan qaabab xogta
• Free version ku eg tahay kabashada fiican
Hel Advanced Disk Recovery
Operating Systems: Windows7 / 8 / Vista / XP / 2000/2008/2003
Wuxuu ka kooban yahay shan qaybood ee soo kabashada xogta, taas oo ay ka wada shaqeeyaan soo celinta xog lumay kaadhka xusuusta, Flash drive, DVD-yada, ulaha xusuusta iyo qaar badan. Recovery xogta Power ma aha kale oo xun midkood iyo doorashada by badan waxaa u sabab ah in ay.
• Waxay leedahay awood ay wax ku ool ah loo soo celiyo nooc kasta oo file tirtirayaa meel kasta oo ay ku jiraan kuwa ka cajaladaha formatted iyo waxyeelo, CD-yada, DVD-yada iyo kuwa kale ee la midka ah wax qalabka lagu kaydiyo. Sidaas daraaddeed soo kabashada file tirtiray waa aan suurtoobin software this
• Taageerada noocyada kala duwan ee Windows Operating Systems.
• Waxaa loo isticmaali karaa labada qof ahaaneed iyo ganacsiga
• biloow soo kabsado habka markii gooyey by hirka hananayn. aad
• qaabeynta Easy iyo isticmaalka
• versions qaarkood ma ogolaan kabashada drives unbootable.
Hel Power Data Recovery
Operating Systems: Windows 8.1 / 8/7 / Vista / 2000 / XP
Waxa uu awood u leeyahay in la soo celiyo image, video iyo music files ka telefoonada gacanta, drives adag, ipod iyo kamaradaha digital. Wondershare Data Recovery waa qalab kale oo dib u soo kabashada file lagu kalsoonaan karo.
• Waxay leedahay in ka badan 4 noocyada kala duwan ee lagu daydo in loo fududeeyo wax kaqabashada si degdeg ah oo wax ku ool ah ee xogta la tirtiro.
• Barnaamijkan wuxuu soo kabashada file u ogolaataa user ay u geliyey nidaamka hakad iyo dib u layliga ka dib aan laga badinin wax macluumaad ama faylasha.
• Waxay siiyaan adeeg wanaagsan marka la barbar dhigo kale software kabashada xogta ee.
• Si fudud oo fudud si ay u isticmaalaan.
• Waxaa si weyn u saameeyeen isbeddel ah ee technology iyo haddii urur ma noqon karo ahaan karo ilaa taariikhda la isbedel ah, taas samayn kartaa software Qaybo.
Operating Systems: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7
Waxaa soo celin karo files halaagnay ama u kharribmay virus, burburin computer. Waxaa soo celin kara sawirada iyo sidoo. Gacan Recovery sidoo kale waa fursad kale soo kabashada xogta si hagaagsan u leedahay faa'iidooyin badan. Haddii khasaaro xogta waxaa keena weerar virus, awood-kaca ah ama koronto iyo sidoo kale qaab kasta failure farsamo aad tirin karaa on this software kabashada file.
• u oggolaanaysa in Falanqeynta ah files tirtiray ka hor dib u soo celinta dhabta ah
• Samaynaya shaandhaynta buuxda oo faahfaahsan faylasha lumay magac, taariikhda iyo tirada
• Waxay muujinaysaa siday suuragal u soo kabashada dhammaystiran ama qayb ka mid ah files tirtiray
• Waxaa soo kaban karto, files tirtiray laakiin ma soo tuuray bin recycle ah
• Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh tirtiray files markii kabsaday.
• kabsan hab nidaamsan.
• kaban karto, files on bin recycle
Hel Handy Recovery
Operating Systems: Windows, ME, NT, Vista iyo XP
Tani waa sidaas samayn naftaada software oo u baahan in si gaar ah ma xirfadaha. Waxaa kale oo ay leedahay sare ah. Lacagta waa in aanay noqon sabab sax ah qof kasta oo aan u leeyihiin software kabashada xogta. GetDataBack waa nooca software kabashada file bilaash ah
• celin karaa xitaa fayl la magacyada dheer iyada oo aan wax magdhow.
• In la barnaamij akhri kaliya aad u hubsan karaa in aan waxba iima aheyn waxaa loo qori doonaa files in la soo kabsaday.
• Casriyaynta ayaa la sameeyaa oo dhan noolyihiin software this.
• Si fudud baa reserved
• Fast iyo fududahay in la isticmaalo.
• Waa qaali ah.
Price: $ 79.00 (Waayo, NTFS), $ 69.00 (Waayo, baruurta)
Kabsado My Files
Operating Systems: Windows 10/8/7 / XP / Vista / 2003
Waa software user dhamaadka jirta nooc oo kala duwan iyadoo ku xiran baahida isticmaalaha. Waxa ay u ogolaataa u previewing xogta ku lumayey oo ay ku jiraan kuwa ka warbaahinta kale lagu kaydiyo. Xirfadaha iyo farsamada ogahay sida ay arrimaha ku saabsan sida ugu wanaagsan ee qof ku rakiban kartaa oo isticmaal software ah soo kabashada xogta. Kiiska waa kala duwan la Ladnaansho My Files software oo la
• Easy in ay isticmaalaan waxa ka mid ah fursad kale oo user-friendly ugu fiican ee laga heli karo suuqa samaynta.
• awoodda kormeere PC soo kabashada file siinayaa fursad ay ku arkaan faylasha dhabta ah si aad u doortaan aad kuwa aad xiisaynayso.
• baruurta 12, baruurta 16, baruurta 32, NTFS, NTFS5, HFS iyo HFS + (MAC) qaar ka mid ah hababka ugu file in software this waa la jaan qaada.
• Soo Celinta nooc kasta oo xog
• Ladnaansho on drives dibadda.
• Samee baaritaan qoto dheer
• Kuu ogolaanayaa doorasho xaddidan oo ah raadinta.
Price: $ 69.95 (Standard), $ 99.95 (Professional), $ 349.95 (Farsamo)
Ka Ladnaansho My Files
Rescue Data PC 3
Operating Systems: Windows Vista, 2003 / XP / 2000 / NT / ME / 98/95 / 3.x iyo DOS
Tani waa software cusub soo kabashada xogta in labada shaqeeyaa sida codsi oo ah CD boot Emergency in uma baahna dib u soo celinta. Data Rescue PC kaalinta ka mid ah software ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada file sabab u ah tayada ay socodyada.
• Waxaa loo isticmaali karaa codsi u ahayn ujeeddooyinka wax ka mid ah soo kabashada xogta ka drive dibadda ama nooc kasta oo kale oo baabuur dibadda.
• Waxaa kaloo loo isticmaali karaa sida degdeg ah CD boot in kiisaska files ayaa la tirtiray iyadoo ay sabab u hartay ee drive ee adag.
• Soo Celinta xogta ka qaabab kala duwan
• Network soo celiyo waxaa lagu taageeray
Hel Data Rescue PC 3